မိတ်ကပ်အဆိုတော် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Civan သည် Litraestyle Spot များအတွက် Litra နှင့်အတူ Creative ရရှိသည်
Darude သည်အပတ်စဉ် Lockdown Livestream စီးရီးကို ATEM Mini Pro ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
ACE မှ 2020 Online EditFest ကိုသြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နှင့် ၃၀ ရက်တွင်ပြသပါမည်
Conductor တွင်ယခုရရှိနိုင်သည့်အတွက် Cinema 4D နှင့် Redshift အသုံးပြုမှုကိုအခြေခံသည့်လိုင်စင်
Dalet CubeNG သည် Broadcast Graphics Workflows များကို Cloud တွင်တင်သည်
တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ Tom Bowers သည် Never.no သို့ဝင်ရောက်သည်
#WeMakeEvents: Calrec သည်ရုန်းကန်နေရသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်နှိုးစက်တိုးပွားစေသည်
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံး Android TV ၀ န်ဆောင်မှုကို ၂၄ နာရီနှင့်အမီနိုမှဖြန့်ဝေပေးသည်
Bridge Digital သည် 4K HEVC Encoding Solution ကို AJA KONA5ဖြင့်သဘောပေါက်သည်
Ayako Yamauchi သည် GUG နှင့် Streaming Project များအတွက် NUGEN Audio Post Bundle ကိုတောင်းဆိုလိုက်သည်
Prism Sound သည် Lyra အသံမျက်နှာပြင်ကိုပြောင်မြောက်သောပုံသစ်တစ်ခုပေးသည်
DGA Productions သည် Teradek နှင့် SmallHD တို့ကိုနေရာတွင်လုံခြုံသောအကွာအဝေးကိုရွေးချယ်သည်
Matthews ၏ Intro ၏ Gobo Plate ™ Mount Adapter
Elk သည် Real-Time Remote ဂီတဖန်တီးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ် Aloha ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Colorist Awards ကိုစတင်ရန်လွတ်လပ်သောအရောင်အသွေးစုံလင်သောအဖွဲ့နှင့် CSI မိတ်ဖက်များ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » မိတ်ကပ်ပညာရှင်
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: Up ကို Make အဆိုတော်
Los Angeles မြို့,, CA
11 / 24 / 17
26-4 နာရီအဘို့ဤတနင်္ဂနွေ, Nov5ရိုက်ကူး။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့ (မုတ်ဆိတ်, အဟောင်းတွေရှာဖွေနေ Insight web studio ၏) အလွန်အသက်ကြီးများမှာကဲ့သို့အငယ်လူတစ်ဦးကိုကြည့်အောင်ရှာဖွေနေပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားပါက, apply ကျေးဇူးပြုပြီး!
ယခုပင်လျှင်မယ့်စာရင်းပေးသွင်းထားသူ? ကျေးဇူးပြု အကောင့်၀င်ခြင်း
ဆံပင် & မိတ်ကပ်အဆိုတော် - သြဂုတ်လ 13, 2020
တိုတောင်းသောရုပ်ရှင်များအတွက်အတွေ့အကြုံကုမ္ပဏီလျှပ်စစ် - သြဂုတ်လ 13, 2020
အင်တာနေရှင်နယ်များအတွက်အကြီးတန်းမီဒီယာဝယ်သူ - သြဂုတ်လ 13, 2020
ဆိုးကျိုးများအပြီး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့် မိတ်ကပ်ပညာရှင် photoshop ထုတ်လုပ်မှု ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း 2017-11-30
ယခင်: 1st လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
နာမည်ကြီး ests ည့်သည်များ NABLF ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ Stations တွင်ထုတ်လွှင့်သည့် America Awards သို့ဝန်ဆောင်မှု၏အခမ်းအနားကိုမီးမောင်းထိုးပြ
McCoy Hanson သည် NAB TV ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တွင်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်
နယူးယောက်ရှိ NAB Show က ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက်ဆယ်ရက်ကြာအတွေ့အကြုံရှိသူ
NAB Show သည်စုပေါင်းစကားပြောသောအွန်လိုင်းမျှဝေသင်ကြားမှုများကိုစတင်ခဲ့သည်
တိုတောင်းသောရုပ်ရှင်များအတွက်အတွေ့အကြုံက Script ကြီးကြပ်ရေးမှူး